Chinese mota dzemagetsi
Tags: Chinese mota dzemagetsi
Kubatsira kweiyo DC mota ndeyekuti iri nyore mune yekumhanyisa kutonga. Izvo zvinongoda kudzora iyo voltage kudzora kumhanya. Nekudaro, iyi mhando yemota haina kukodzera kushanda mune yakanyanya tembiricha, inopisa uye nedzimwe nharaunda, uye nekuti mota inoda kushandisa kabhoni mabrashi seCommutator zvinoriumba (brashi motors), saka zvinofanirwa kugara uchichenesa tsvina inogadzirwa ne kabhoni brashi kukweshera. Mota isina bhurasho inonzi mota isina bhurasho. Inofananidzwa nebrashi, mota isina brashi haina simba-rekuchengetedza uye rakadzikama nekuda kwekukonana kushoma pakati pekabhoni bharashi uye shaft. Iyo yekugadzira yakanyanya kuoma uye mutengo wakakwira. AC mota dzinogona kushandiswa mune yakanyanya tembiricha, inopisa uye dzimwe nharaunda, uye hazvidi kuchenesa kabhoni brashi tsvina nguva dzose, asi zvinonetsa kudzora kumhanya, nekuti kudzora kumhanya kwe AC mota kunoda kudzora kuwanda kwe AC ( kana kushandisa induction Iyo mota inoshandisa nzira yekuwedzera yemukati kuramba kuti ideredze mota kumhanya panguva imwechete AC frequency), uye kudzora kwayo magetsi kunongokanganisa torque yemota. Kazhinji, iyo voltage yemagetsi mota ndeye 110V uye 220V. Mukushandisa kwemaindasitiri, kune zvakare 380V kana 440V.
Nheyo yekutenderera kwemotokari inoenderana nemutemo waJohn Ambrose Fleming wekuruboshwe. Kana waya ikaiswa mune yemagineti, kana iyo waya iine simba, iyo waya inodambura iyo magnetic field mutsetse uye fambisa waya. Magetsi anopinda mucoil kuti aite magnetic field, uye simba remagineti remagetsi rinoshandiswa kugadzira electromagnet ichienderera ichitenderera mune magineti akasungirirwa, ayo anogona kushandura simba remagetsi kuita simba remagetsi. Inopindirana neyemagineti isingagumi kana yemagineti inogadzirwa neimwe seti yemakoiri kuunza simba. Nhungamiro yemota yeDC ndeyekuti stator haifambe, uye iyo rotor inofamba ichinanga munzira yesimba rinogadzirwa nekudyidzana. Iyo AC mota ndiyo stator ichitenderera coil inosimbiswa kuti igadzire inotenderera magineti munda. Iyo inotenderera magnetic field inokwezva iyo rotor kutenderera pamwechete. Chimiro chakakosha chemota DC chinosanganisira "armature", "munda magineti", "snumeric mhete", uye "brashi".
Armature: Iyo yakapfava simbi simbi iyo inogona kutenderedza yakatenderedza axis inovhundutswa nema multiple coils. Munda magineti: A rinogara zvachose magineti kana remagetsi rinogadzira rinobva munda. Slip mhete: Iyo coil yakabatana kune maviri semi-denderedzwa kutenderera mhete pamativi ese ari maviri magumo, ayo anogona kushandiswa kuchinjisa mafambiro eazvino sezvo coil inotenderera. Yese hafu yekutendeuka (180 madhigirii), iko kutungamira kwazvino pane coil kunochinja. Brashi: Kazhinji inogadzirwa nekabhoni, iyo yekunhonga mhete inosangana nebrashe munzvimbo yakatarwa yekubatanidza kune simba sosi.
Izvi zvinotevera zvese zvinodaidzwa kuti motors
Yakarongedzwa nemagetsi magetsi:
Shandisa magineti anogara aripo kana ma electromagnet, brushes, commutators uye zvimwe zvinhu. Iwo mabrashi uye ma commutator anoramba achipa ekunze DC magetsi magetsi kune iyo coil yeiyo rotor, uye shandura mafambiro eazvino munguva, kuti rotor ikwanise kutevedzera iwo iwo iwo maitiro Enderera kutenderera.
Iyo yekuchinjanisa yazvino inopfuudzwa kuburikidza neiyo stator coil yemota, uye iyo yakakomberedza magnetic shamba yakagadzirirwa kusundira iyo rotor panguva dzakasiyana uye dzakasiyana nzvimbo kuti ienderere ichimhanya
* Pulse mota
Simba remagetsi rinogadzirwa nedhijitari IC chip ndokushandurwa kuita pulse yazvino kudzora mota. Iyo yekutsika mota iri mhando yekushinya mota.
Yakarongedzwa nechimiro (ese DC uye AC magetsi emagetsi):
Iyo inoratidzirwa nekumhanyisa kumhanya uye hapana kudikanwa kwekumhanyisa mirau, yakaderera yekutanga torque, uye kana mota ikasvika pakumhanya kumhanya, iyo kumhanya yakatsiga uye kugona kwacho kwakakwirira.
Iyo inoratidzirwa neyakareruka uye yakasimba dhizaini, uye inogona kushandisa zvinodzivirira kana ma capacitors kugadzirisa iyo kumhanya uye kumberi uye kudzosera kutenderera. Chaizvoizvo kunyorera mafeni, macompressor, uye maair conditioner.
* Inodzosera mota
Chaizvoizvo chimiro pamwe nehunhu seye induction mota, inoratidzirwa neyakareruka mabhureki mashandiro (kukweshera kwakapwanya) yakavakirwa muswe wemota. Chinangwa chayo ndechekuwana izvo zvinodzoserwa zvehunhu nekuwedzera yekukwikwidza mutoro uye kudzikisa mhedzisiro yeiyo induction mota. Huwandu hwekuwedzeredza-kutenderera hunogadzirwa nechisimba.
Iyo inoratidzirwa nerudzi rwekupomba mota, mota inotenderera zvishoma nezvishoma pane imwe kona. Nekuda kweiyo yakavhurika-loop yekudzora nzira, haidi mhinduro yemidziyo yekumira kuona uye nekukurumidza kumhanya kuti uwane chaiyo nzvimbo uye kumhanya kudzora, uye Kwakanaka kugadzikana.
Iyo inoratidzirwa neyakajeka uye yakagadzikana kumhanya kudzora, kukurumidza kumhanyisa uye kudzora mhinduro, kukurumidza kuita (kukurumidza kudzosera kumashure, kukurumidza kumhanyisa), diki saizi uye huremu huremu, yakakwira simba rekubuda (kureva. inoshandiswa zvakanyanya munzvimbo uye nekumhanyisa kutonga yepamusoro.
Iyo ine yakareba-sitiroko yekutyaira uye inogona kuratidza yakakwirira-chaiyo yekumisikidza kugona.
Rotary Shanduri, Inotenderera Amplifier, nezvimwe.
Chaizvoizvo induction motors anoshandiswa zvakanyanya
Kune akawanda mashandisiro emagetsi, kubva kumaindasitiri anorema kusvika kumatoyi madiki. Mhando dzakasiyana dzemagetsi emagetsi dzinosarudzwa munzvimbo dzakasiyana. Heino mimwe mienzaniso: michina inogadzira mhepo, senge mafeni emagetsi, mota dzemagetsi dzekushandisa, magwa uye mamwe maelevheta, maelevhetti anofambiswa nemagetsi, senge njanji dzepasi pevhu, mafekitori etram uye ma hypermarket Magetsi otomatiki madhoo, emagetsi emagetsi, uye zvekushandisa zvevanhu pamabhazi ebhandi ekufambisa
Optical drive, purinda, muchina wekuwachisa, pombi yemvura, dhisiki dhisiki, wemagetsi reza, tepi rekodhi, vhidhiyo rekodhi, CD turntable, indasitiri uye kushambadzira kushandiswa
Fast erevheta anoshanda muchina (senge: muchina chishandiso) yemachira muchina chisanganiso.